Kutsvaga Yechipiri Opinion? Mazana? | Martech Zone
Paive nemoto chaiwo apo ini inosimudzira uchishandisa boka revanhuSPRING. Avo vari munharaunda yekugadzira yandinoremekedza zvakanyanya kunyangwe zvaive zvinyengeri kukoshesa crowdSPRING nemamwe spec masisitimu senge 99designs, uku uchitsigira kuhaya dhizaini maimendi zvakare.
Handitende kuti ndeimwe kana imwe, ini do farira zvese zviri zviviri! Ndakadenha vaviri veNo! Vanotsigira vatsigiri kuti vauye nerimwe zano:
Ko kutanga kwebhizinesi kunowana sei dhizaini huru pasina zviwanikwa zvekuzvibhadharira?
Vagadziri vatsva vanowana sei mikana yekuwana zita ravo nekushanda pamusika (pasina kuita mahara dhizaini!)
Panogona kuve nechetatu sarudzo, futi. Kana rako bhizinesi uye risingakwanise kuwana rakakura dhizaini, pamwe iwe unogona kuwana mamwe maonero maererano neyako dhizaini kana dhizaini dhizaini. Ndizvo chaizvo Concept Feedback yakagadzira.
Concept Feedback ingangova yemashup… kumwe kunhu pasocial network yevagadziri uye neye Digg -style application yekuvhotera dhizaini dhizaini Zvichida chinonyanya kukosha ndechekuti haufanire kutumira chirevo pachena, unogona kudzora kuti ndiani anokwanisa kuwana pfungwa yako. Izvi zvinogona kubatsira kune yakatarisana neboka dhizaini mhinduro.
Nei Andrew akavhura saiti?
Semutungamiriri wekushambadzira, Andrew Follett anga atangisa akawanda magadzirirwo epfungwa… achinyatso tumira tsamba kune shamwari, vemhuri nevavanoshanda navo, vobva vanyora mhinduro. Maitiro acho akatora nguva yakawanda uye aisabatsira zvakanyanya. MunaNdira, Andrew akasvika kushamwari ku DevBridge nezve iyo pfungwa. DevBridge yakafunga kudyidzana naAndrew uye kusimudzira kwakatanga munaKurume. Pfungwa Mhinduro yakatangwa muna Chivabvu.
Ndeapi matariro aAndrew eramangwana resaiti?
Parizvino, Andrew ari kushanda mukukudza huwandu hwevashandisi pane ino saiti uye vagadziri vanotora chikamu. Sezvo ivo vachiramba vachikura, ivo vanoda kunyatso shandisa Concept Mhinduro kuti varambe vachiwedzera nekuvandudza mamwe maficha mune ino saiti.
Ini ndinofunga ichi chirevo chakakura! Zvakare, kudos kusvika DevBridge pane kuvandudza saiti!
Tags: pfungwa mhindurorichivamugadziri mhindurozvaunofungakushambadzira mhindurouiui mhinduromushandisi ruzivo ruzivomushandisi interface mhindurouxux mhindurowebhusaiti dhizaini mhinduro